प्रदेश नं २ मा मतदान जारी, प्रमुख र्निवाचन आयुक्त सहित शीर्ष नेताहरुले कहाँबाट भोट हाले ?
काठमाडौँ असोज २ । काठमाडौँ । स्थानीय तह तेस्रो चरणको चुनावअन्तर्गत सोमबार प्रदेश नं. २ मा मतदान सुरु भएको छ। तेस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएसँगै संविधानअनुसार देशभर स्थानीय सरकारको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले गर्नेछन्।
सबै भन्दा पहिले नेपालद्वारा मतदान
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मतदान गर्न गौरको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । उनी बिहानै मतदान गर्न आफ्नो केन्द्र आइपुगेका थिए। नेता नेपालले राम जानकी कन्या प्राथमिक बिद्यालय गौरबाट पहिलो मतदाताको रुपमा मतदान गरेका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा मतदान
अत्यन्तै हर्षोल्लासका साथ बिहान ५ बजेदेखिनै लामबद्ध भई मतदाता मतदान कार्यमा धैर्यतापूर्वक लागेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले बिहान ७ः०० बजे मतदान गरेका छन् ।
उनले सप्तरी सदरमुकामस्थित राजविराज नगरपालिकाको वडा नं २ आधारभूत विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा पुगी मतदान गरेका हुन् । सो केन्द्रमा सर्वप्रथम उनले मतदान गरेका थिए ।
मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीमाझ उनले भने, ‘२० बर्षपछि मतदान गर्न पाउँदा मलाई निकै खुशी लागेको छ । नयाँ संविधान (व्यवस्था) अन्तर्गत भोट गर्न पाउँदा म निकै खुशी लाग्यो । यस निर्वाचनले सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास लिएको छु ।’
सम्पूर्ण मतदातालाई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न उनले आग्रह पनि गरे । निर्वाचन प्रक्रियमा केही सामान्य त्रुटीहरु भएका छन्, ती त्रुटीलाई हामीले सच्चाएर अघि बढेका छौं ।
राजेन्द्र महतोद्वारा दुर्गा मावि केन्द्रबाट मतदान
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले गृहजिल्ला सर्लाहीको श्री दुर्गा खोभारी जनता उच्च माविबाट मतदान गरेका छन् ।बिहान करिव साढे सात बजे महतोले चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित निर्वाचन बुथ केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् । राजपा नेपालका महासचिव मनीषकुमार सुमनले पनि सप्तरीबाट मतदान गरेका छन् । सुमनले राजविराजमा मतदान गरेका हुन् ।
निधिले गरे राजेश्वर निधि उच्च मावि केन्द्रबाट मतदान
पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जनकपुरको राजेश्वर निधि उच्च मावि केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। बिहान ८ बजे निधिले मतदान गरेका हुन्। मतदानपछि उनले लामो समयपछि स्थानीय चुनामा मतदान गर्न पाउँदा खुसी भएको बताए। उनले मधेसी जनता पनि खुसी रहेका बताए। उनले भने ‘लामो समयपछि मतदान गर्न पाएँ, खुसी छु। मधेसी जनता खुसी छन्।’
मतदाता ६ बजे अगाडि नै लाइनमा
पर्साका प्राय सबै स्थानीय तहमा मतदान सुरु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरसहितका अधिकांश मतदान केन्द्रमा मतदात सुरु भएको छ। मतदाता बिहान ६ बजे अगावै लाइन बसिसकेका थिए । वीरगन्ज महानगरमा मात्र एक लाख ८ हजार ५०१ मतदाता छन्। महानगरमा ३२ वडा छन्। पर्सामा एक महानगरसहित १३ स्थानीय तह छन्।
धनुषा जिल्लामा १८ स्थानीय तहका लागि ३२७ मतदानस्थल र ५३२ मतदान केन्द्रमा समयमै मतदान सुरु गरिएको निर्वाचन कार्यालय धनुषाकी प्रमुख पुष्पा झाले बताइन् । अत्याधिक गर्मीका कारण मतदाताहरुले बिहानकै समयमा मतदान गर्न आ‍-आफनो मतदान स्थलमा पुगिरहेका छन् ।
मतदाताको उत्साहपूर्ण उपस्थिति
मतदानका लागि निकै उत्साहका साथ मतदाता बिहान सबेरै मतदान केन्द्रमा पुगेर लामबद्ध भएर बसेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । अहिले अधिकांश मतदान केन्द्रमा मतदाताको घुइँचो लागिसकेको छ । तराई–मधेशमा दिउँसो गर्मी हुने भएकाले पनि मतदाताको बिहान उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आजै रातीबाट मतगणना
३ चरणमा भएको स्थानिय तहको चुनावको अन्तिम चरण अन्तरगत प्रदेश नम्वर २ मा चुनाव भए सगैँ करिव २० वर्ष सम्म रिक्त रहेको जनप्रतिविहीन अवस्थाको अन्तय हुने भएको छ ।
प्रदेश नम्वर २मा प्रमुख ३ दल सहित तराई केन्द्रीत दलहरु विच तिव्र प्रतीस्पदा हुने अनुमान गरीएको छ । निर्वाचन कार्यलयले दिएको जानकारी अनुसार मतदान सकिए पस्चात आजै रातीबाट मतगणना कार्य समेत हुने छ।
यता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राजविराज नगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष उम्मेदवार महन्थी यादवको निधन भएपछि सोमबार हुने सो वडाको मतदानको कार्यलाई स्थगित गरी यही असोज ५ गते गर्ने निर्णय भएको छ ।
साबिकको देउरी भरुवा गाविस हाल राजविराज नगरपालिका–१५ बस्ने राजपाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार ६५ वर्षीय यादव केही दिनयता रक्त क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो । शनिबार साँझ घरमै उहाँको निधन भएको थियो ।
यादवको निधनका कारण राजविराज नगरपालिका वडा नं १५ को निर्वाचन सारेर यही असोज ५ गते मतदान हुने सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेले बताउनुभयो